MBP: Micro-Blogging Provider uye Protocol | Martech Zone
Chishanu, June 13, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Imi vanhu munogona kunge makaverenga nezve tiff kwekanguva kumashure pakati Robert Scoble uye Twitter. Scoble akasangana ne Twitter uye kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu. Vamwe vanhu vari kutaura nezve bhizimusi modhi neaya madiki-blogging masevhisi uko vashandisi vakakurumbira vanobhadhara sevhisi.
Ini ndingangoda kuendesa irinani chikumbiro uye ndeyemambure e micro-blogging mapuratifomu (Shamwari, Tumblr, Jaiku, Twitter, Simba, Seesmic, Brightkite, plurk, qik, nezvimwewo) kusarudza pane Micro-Blogging Protocol. Ese aya masevhisi anogona kuzobva ave Micro-Blogging Vanopa.
Nharembozha, vhidhiyo, kurira, zvinongedzo, zvakabatanidzwa, mapikicha, uye mameseji anogona kunge ari mune imwechete, yakachena protocol. Iko kugona 'kutevera' kunogona kuburitswa mumapuratifomu ese. Imwe neimwe chikuva inogona kuve yakasarudzika kubva kune imwe mumashandisi avo ekushandisa uye maumbirwo, asi mutoro uye mukurumbira wevamwe pamusoro peumwe zvinogona kutanga kupararira. Haasi wese mupi kunyange anotofanira kutsigira akasiyana midhiya. Izvi zvinopa hukuru hwekuwedzera uye vashandisi vanogona kuteedzera kune vatengi mutero wavanoda zvakanyanya.
Haisi nzira yekufungidzira - zvingave zvakanyanya seInternet Service Provider zvavakaita neemail. Ini ndinogona kushandisa chero mutengi wandinoda uye pese pese ndinobata chero munhu pane yangu yekubata runyorwa.
Saka ipapo unayo - nguva ye Micro-Blogging Protocol muindasitiri! Uye ngatidanei vanopa Micro-Blogging Vanopa. Ngatiitei izvi zvive nyore kumutengi!
Jun 13, 2008 na11:59 AM
XMPP zvaizoita zvakanaka.
Kuda iyi pfungwa, ndinoshamisika kana zvaizomboitika zvakadaro?
Micro blogging inofanirwa kuve yakabatanidzwa sevhisi apo vashandisi vanozokwanisa kuishandisa sehuwandu hwekutumira mameseji (kugadzirisa shamwari dzese), bhaa yemamiriro pasocial network (senge FaceBook chimiro basa), uye kunyangwe email siginecha.
Jun 16, 2008 na1:46 AM
Inonzwika senge zano rakanaka, kunze kwekunge munhu mumwechete mumwe nemumwe mukati meakawanda emakambani iwayo aitofanira kutora hutungamiriri kuti zviitike. Ndinogona kunge ndiri kutsoropodza, asi ndakaona zvinhu zvakawanda zvine hukama zvinogona kuitika asi hazvina kudaro handisi kuona izvi zvichiitika, kana kusvika bhemoth yakaita seGoogle yamisa protocol ndokuti “munhu wose anoitevera, kana kuti zvimwe.” Sorry nekuve negative, but once kurumwa kaviri nyara.
BTW, handina chokwadi kana wazviona asi ndakazochinja blog yangu kune WordPress mushure mekuzvimisikidza hiatus yerinenge gore. Ndaive kumirira yenguva (uye kurudziro) kuti pakupedzisira ishanduke kubva kune yangu yekare software yakanga yanyanya kunetsa iyo yaive yakakosha. Iye zvino ini ndinogona kuita zvinopfuura kungotaura pane yako blog uye nevamwe; Ndinogona kutanga blogging zvakare!
FYI, yako ingori imwe chete yematatu (3) mablog andanyora seanoshinga kutevera izvozvi. Ndinofunga kuti ndinofanira kuwedzera imwe blogroll chikamu che "MaBlogs ndaizotevera dai ndaiva nenguva chete!” kune mamwe mablogi makuru kunze uko. '-)
Jun 16, 2008 na8:42 AM
Chokwadi ngachitaurire, ndanga ndisiri kuita kuverenga kwakawanda kwemablogi (ndinoda) zvakanyanya sezvandinofanira. Dzimwe nguva basa rinopinda munzira ;).
Ndinotenda nerutsigiro uye nekugamuchirwa kudzoka kune iyo blogosphere, Mike!
Kutaura chokwadi ini handisi kuona kuti chero munhu ane nguva yekuverenga akawanda mablogi. Pandinozvibvumira kuenda kwenguva yandisina chandinoitwa uye ipapo ndinonzwa ndakashata zvikuru pamusoro pachangu nokuda kwaizvozvo. Zvino kana ndikakwanisa kuzvibvumira kupinda mu“kukurukurirana” (verenga “debate”) ndipo painozonyatsoita nguva. Handizivi kuti vanhu vakashanda zvine mutsindo vanowana sei nguva yazvo.
Asi chimwe chezvikonzero nei ndinoramba ndichiverenga yako ndechekuti, kune misoro inondifadza, yako yakanyanya kukwira pa "signal" pane pa "ruzha" reshiyo pane akawanda mablog. Kudos.